Kutumira - Inotevera Supply Chain
NextsChain inoshanda pamwe ne300+ Vatakuri kuti vape Kutakura Pasi Pose.
Yedu Order Distribution Maitiro
Ndezvipi zvakanakira NextsChian Kutumira?
1. Partner pamwe ne300+ vatakuri venyika, kambani yedu inokwanisa kupa inokurumidza uye isingadhuri kutumira, iyo inogona kubatsira Shopify vatengesi kuti vawedzere bhizinesi ravo rekudonha pasi rese. Kwete United States chete.
2. Base pane yedu pachedu yakasimba logistics yekutsvagisa system, NextsChain inopa yekutevera infomation yezuva nezuva yekuvandudza kwepasuru yakazara yakazara neNextsChain. Inogona kubatsira Shopify vatengesi kuti vatarise mapasuru avo uye vagadzirise maodha ese zvakaringana uye zvirinyore, kana zvikaitika nekuita pasuru isina kujairika munguva uye kudzikisa kurasikirwa.
3. NextsChain ichagadzirisa inotakura base pane yedu inonzwisisika logistics system panguva yemwaka wakaita seChishanu Chishanu neKisimusi, kuona kuti vatengi vanogona kugamuchira mapasuru avo pakutanga.
4. Zvisinei hazvo kuti chii chikamu chehupfumi, Fast Express kana Chikepe neGungwa, NextsChain ndiyo nguva dzose sarudzo yako yakanaka.
7 - 11 Bhizinesi Mazuva *
8 - 12 Bhizinesi Mazuva *
6 - 8 Bhizinesi Mazuva *
8 - 10 Bhizinesi Mazuva *
3 - 5 Mazuva Ebhizinesi *
5 - 8 Mazuva Ebhizinesi *
6 - 10 Bhizinesi Mazuva *
7 - 10 Bhizinesi Mazuva *
14 - 22 Mazuva Ebhizinesi *
15 - 25 Bhizinesi Mazuva *
Nguva yekufambisa yakanyorwa haisanganisi kusvika kumazuva maviri ekugadzirisa nguva (kusanganisa Mugovera, Svondo, uye Mahoridhe).
Nguva yekutumira inofungidzirwa uye inotanga kubva pazuva rekutakura, panzvimbo pezuva reodha, uye inogona kutora nguva yakareba kudarika zuva raitarisirwa nekuda kwekero isiriyo, maitiro ekuregedza tsika kana zvimwe zvikonzero.
Nekuda kwe COVID-19, iyo inofungidzirwa nguva yekuuya ichave mazuva 15-45.
NextsChain Kubatsira Zvakakosha
Nei Nextschain iri nani?